Sida loo kiciyo ninka: talooyinka iyo tabaha ugu fiican | Ragga Stylish
Bulshada dhexdeeda, dareenka ah in la siiyo raaxo dumarka ayaa aad u baahsan maaddaama ay si aad ah u adag tahay qaab ahaan. Si kastaba ha noqotee haween badani ma oga sida loo kiciyo ninka. Waa inaad taqaanaa sida loo maro jidhkooda oo dhan oo aad ku dhaqanto xeelado kaa caawin kara inay la kulmaan farxad weyn. Sida dumarka oo kale, raggu waxay leeyihiin aagag badan oo erog ah oo si wanaagsan loo kiciyo oo u horseedi kara kacsi galmo oo aad u fiican.
Qodobkaan waxaan ku baraynaa inaad sifiican u ogaatid oo aad u sahamiso sida loo kiciyo ninka.
1 Talooyin ku saabsan barashada sida loo kiciyo ninka
2 Kici kici aagagga wax guma
3 Sida loo kiciyo ninka: galmo samee
4 Barta H
Talooyin ku saabsan barashada sida loo kiciyo ninka
Waa inaad ogaataa in ninku kaliya uusan kicin ficil iyo ficil. Taasi waa, uma baahnin oo kaliya in nala taabto si aan u faraxsanaano. Sasabasho, kicin iyo kicin waa ereyo muhiim ah oo laga fiirsado waqtiga la wadaagayo kulan galmo oo la magacaabay. Waa inay cadahay in ninku sidoo kale ku farxi karo kaliya inuu yeesho rajo.
Kahor barashada sida loo kiciyo magaca, waa inaan ogaano inaan sugno xoogaa. Si kale haddii loo dhigo, waa inaad ogaataa sida caqliga loo sugo. Nin la xanaaqay ama si daran laakiin si xeeladeysan loo sasabay. Degdeg laguma talinayo. Xullo wakhti fiican oo kicinta ah. Marka kacsigu kaco waxaad isticmaali kartaa gacmahaaga oo si tartiib ah u salaaxa guska. Ha noqon mid aad u kacsan, maxaa yeelay waxay waxyeello u geysan karaan. Xubinta ficilka ah waxay noqon kartaa mid xasaasi ah iyadoo kuxiran qofka. Sida haweenku aysan rabin inaynaan si dhib yar u taabanno xubnahooda galmada, ragga sidoo kale ma taabtaan.
Maskaxda ku hay in ninku uusan marwalba rabin inuu galmo sameeyo. Bulshada dhexdeeda Waxaa loo maleynayaa in raggu had iyo jeer doonayaan inay u galmoodaan haweeney kasta iyo waqti kasta. Tani ma ahan tan. Waxay kuxirantahay nooc kasta oo nin ah iyo macnaha guud ee aan kujirno. Waxaa jira waqtiyo shaqada dartiis, walaac ama dareen la'aan darteed majiraan rabitaan galmo. Haddii aad isku dayeyso inaad barato sida loo kiciyo magac waa inaad maanka ku haysaa qodobkan.
Aan soo qaadano tusaalaha aan isku dayeyno inaan ku sasabno nin inuu galmo sameeyo. Haddii uusan ninku u muuqan mid aad u soo dhaweynaya, ha sii wadin isku dayga Ugu dambeyntiina waxay ku dambeeyaan dhibaatooyin xagga wada xiriirka ah oo ninku wuxuu isku qasbi doonaa inuu galmo sameeyo. Waxa aan u rabno mid waa inaynaan kuwa kale u qaban.
Kici kici aagagga wax guma
Si loo barto sida loo kiciyo ninka waa inaan barannaa sida loo qeexo aagagga dareenka jirka. Aagagga jirka waa qaybo ka mid ah jirka oo soo bandhiga xasaasiyad weyn ama dareemayaasha dareemayaasha ah haddii aan barbar dhigno kuwa kale. Halkan waxaan ku haynaa kumanaan isku dhafan oo suurtagal ah oo waliba kuxiran dhadhanka qof kasta. Waxaa jiri doona dad jecel qaybaha qaarkood ee jirka in la kiciyo, halka kuwa kalena aysan ku faraxsaneyn haba yaraatee.
Labada aag ee ugu caansan ee kicinta ragga waxaan ka helnaa waxyaabaha soo socda:
Xeelad kale ayaa ah in la isticmaalo dharka hoosta oo soo jiidasho leh. Soo iibso dharka hoosta labiska ah cabsi la'aan ama xishood la'aan. Xaqiiqdii wiilkaaga ayaa kuu mahadnaqaya. Intaas waxaa sii dheer, tan waxaa loo uuraystay inay tahay haweeney kalsooni iyo kalsooni ku qabta jirkeeda iyo galmo ahaanba. Maskaxda ku hay in rajooyinka ninku ay sidoo kale u adeegaan inay kiciyaan. Sidaa darteed, nigis u adeegta abuurista himilooyin ayaa waddo dheer u mari kara kicinta nin.
Sida loo kiciyo ninka: galmo samee
Ugu dambeyntiina, waa inaad barataa waxa furaha u ah barashada sida loo kiciyo ninka xilliga galmada. Mid ka mid ah waxyaalaha qarsoon ee lagu ilaalin karo xiriir galmo oo raaxo leh oo waara ayaa ah in lagu dhaqmo galmada afka. Candhuufdu waxay ka dhigeysaa xubinta taranka ragga inay kacsan tahay muddo dheer waxayna ka caawisaa ninka inuu helo raaxo badan. Haddii aadan jeclayn ama ay adiga ku neceb tahay, waxaad isticmaali kartaa qaar ka mid ah saliidaha la carfiyay. Waxa ugu caansan ayaa ah haddii aad wiil la joogto, inaan laguu soo celin karin ilaa ninku uusan haysan nadaafad wanaagsan. Waxa ugu caansan waa galmada afka oo ragga iyo dumarkuba aad ugu riyaaqeen. Waa qeyb muhiim ka ah galmada.
Siigaysiga sidoo kale waa ikhtiyaar. Guska waa in si tartiib ah looga qabtaa usheeda dhexe. Ka dib waa la duugi karaa kor iyo hoos ama u beddelidda laxanka. Xiniinyaha waad isku salaaxi kartaa isla waqtigaas. Waa macquul inay tahay ninka dejiya laxanka aad rabto inaad ku siigaysato. In kasta oo ku celcelinta dhaqdhaqaaqa kor iyo hoos markasta ay ka badan tahay in ku filan, waa nooc caajis ah. Waxaa jira qaybo badan oo ka mid ah anatomy-ka ragga oo aad xisaabta ku darsan karto si ay kuugu keento farxaddaada ugu badan.
Tani waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ay haween badani ku dhacaan isla keli ahaanta. Waana in kacsiga labku uu aad uga fudud yahay kan dumarka. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira noocyo kala duwan oo orgasms ah. In nin gaaro kacsiga macnaheedu maahan inuu si wanaagsan ugu raaxeystay. Waayo, guska ku qaad xididka iyo kaas oo si fiican gacmaha loogu hayo. Waad ku qanacsan tahay dhammaan noocyada duugista iyo salaaxista iyo salaaxidda indha indhuhu waa ikhtiyaar wanaagsan, maadaama ay tahay aag aad u xasaasi ah.
Qodobkani waa qanjirka 'prostate'. Waxay mas'uul ka tahay soo saarista inta badan shahwada waana aag aad u xasaasi ah. Waxaad raadin kartaa qanjirka 'prostate' ilaa 7 sentimitir futadaada, oo u dhaw cawradooda. Waxay leedahay qiyaasta qiyaasta ah ee laga soo sheegay walnut. Maskaxda ku hay in rag badani ay dareemayaan raaxo la'aan tan, markaa waa inaad horay u sii weydiisaa haddii ay jecel yihiin iyo in kale.
Iskuday inaad duugto xubinta cambarka kadibna fartaada ku wareeji futada. Qaado saliid si taxaddar leh u geli. Markaad gudaha gasho, farahaaga kor iyo hoos u dhaqaaq waxaadna arki doontaa inuu kacsan yahay.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan sida loo kiciyo ninka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loo kiciyo nin